IMicrosoft Lumia 640, ibanga eliphakathi elithandekayo | Izindaba zamagajethi
IMicrosoft Lumia 640, ibanga eliphakathi nelithakazelisayo esivele linalo Windows 10 Iselula
AmaVillamandos | | AmaSelula, Izibuyekezo
Amadivayisi eselula ane-Windows operating system ahweba ngokwanda ezikhathini zamuva, ngokuphepha okuphelele ngenxa yokukhishwa okusha kwe- Windows 10 Iselula futhi ngoba iningi lamadivayisi we-Lumia emakethe anika umsebenzisi idizayini enhle, ezinye izinto ezithokozisayo nokucaciswa, ukusebenza okuhle futhi ngaphezu kwakho konke intengo engabizi cishe kunoma yiliphi icala.
Icala lakho konke lokhu esikhuluma ngakho yi Lumia 640. Ukusizakala ngokubuyela kwayo endaweni yokuqala emakethe yocingo lweselula Sikuhlolile futhi ungafunda ukuhlaziywa kwethu okuphelele.
Ngaphambi kokuqala ukuhlaziywa, kubalulekile ukukucacisa, ukuze ungasidukisi, ukuthi sisebenzelana nedivayisi yeselula esezingeni eliphakathi nendawo, esinikeza izici ezisezingeni eliphakeme, kepha ngokungangabazeki ezingenakho izinto ezithile umkhumbi wangempela ohamba phambili ezingeni le-LG G4, i-Galaxy S6 noma i-iPhone 6 noma i-6S.
Ukulungele ukwazi i-Lumia 640 eduze? Lungela, nakhu sihamba.
1 Umklamo; plastic njengoba protagonist main
2 Isikrini; ukufeza okulindelwe ngaphandle kokuchitha isikhathi
3 Amakhamera, indawo ebuthakathaka yale Lumia 640
4 Izingxenyekazi zekhompuyutha; ukuphela okuhle nokunamandla
5 Izigubhu; iphuzu eliqinile lale Lumia 640
6 Intengo nokutholakala
9 Izinzuzo nokuqeda
Umklamo; plastic njengoba protagonist main
Kuze kube iMicrosoft yethula iLumia 950 ne-950 XL, enye yezimpawu zawo wonke amatheminali ayo kwaba ukwakheka kwayo. Ngokuqedwa kwepulasitiki nemibala egqamile bakwazile ukukholisa bonke abasebenzisi, kepha ngasikhathi sinye basishiya singenandaba ngokungaguquki kumklamo ngokungangabazeki owawusalela emuva.
ILumia yokugcina eyethulwe emakethe isivele inesiphetho sensimbi, kepha kule Lumia 640 ipulasitiki, e-orange kithi, yi-protagonist eyinhloko. Ngaphandle kwento esetshenzisiwe, umuzwa osesandleni ungaphezu kokuhle futhi noma ngabe besingathanda olunye uhlobo lwento, kufanele ngithi angiyithandi nakancane.
Kokunye konke siphambi kwesiginali nabanye Ubukhulu be-141.3 x 72.2 x 8.85 mm leyo ifaka isikrini esingu-5-intshi nesisindo esiphelele esingu-144 gram, esingasho ngaso ukuthi sibhekene ne-terminal enosayizi ojwayelekile nesisindo esincishisiwe. Lapho sesinayo le Lumia esandleni, singasho ukuthi sibhekene nosayizi ophelele kanye ne-terminal ekhanya kakhulu.
Isikrini; ukufeza okulindelwe ngaphandle kokuchitha isikhathi
Njengoba sesishilo, le Lumia 640 ine- Isikrini se-intshi se-5 lokho kusinikeza isinqumo se Amaphikseli angu-1080 x 720, anesisindo samaphikseli esingu-294.
Akusona isikrini esihle kunazo zonke emakethe esingasitholi kuselula, kepha ukufeze ngokuphelele okulindelekile ebesinakho. Singaqokomisa ukuthi ama-engeli wokubuka mhlawumbe angcono kunokulindelekile futhi nemibala ikhonjiswa ngendlela yangempela.
Okokugcina, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi inokuvikela kweGorilla Glass 3 okuzoyivikela kakhulu kunoma yikuphi ukuwa noma ukushaywa, yize njengoba sesishilo ukuthi akusisusi ngokuphelele esikrinini esingahlephuka noma siqhekeke, ngakho-ke kufanele siqaphele kakhulu uma sifuna iLumia yethu ihlale isikhathi eside.
Amakhamera, indawo ebuthakathaka yale Lumia 640
Mhlawumbe ngoba ngijwayele kabi ikhamera kuselula yami ephezulu, kepha amakhamera ale Lumia 640 angishiye ngibanda kancane futhi kuze kufike ezingeni lokucabanga ukuthi ngokungangabazeki kuyiphuzu layo elibuthakathaka.
Nge Ikhamera yangemuva eyi-8 megapixel Nge-autofocus, i-4 x zoom yedijithali, inzwa engu-1/4-intshi, ukuvula kwe-f / 2.2, i-flash ye-LED, i-flash enamandla, nokubanjwa okucebile, singathola izithombe zekhwalithi ezifanele, inqobo nje uma ukukhanya okukhona kulungile. Njengoba ukwazi ukubona ezithombeni engikukhombisa zona ngezansi, imiphumela ayibi mibi ngokuphelele, yize ingenelisi ngokuphelele;
Inkinga iyavela, njengakumadivayisi amaningi emakethe lapho ukukhanya kuyindlala. Singasho ukuthi ukukhanya ngokugcwele izithombe zisezingeni elifanele, noma ngabe mhlawumbe bengilindele umphumela ongcono futhi ngokuqinisekile ngishiya okuningi okufiselekayo lapho indawo inokukhanya okuphansi.
Ngokuqondene nekhamera engaphambili, isinikeza isisombululo esingu-0.9 mpx wide-angle HD, f / 2.4 kanye ne-HD resolution (1280 x 720p), ngaphezulu kokwanele ukuthatha i-selfie, yize sesivele sikuxwayisa ukuthi lokhu ngeke kube nencazelo ephelele njengaleyo oyibonile kwamanye amatheminali emakethe.
Izingxenyekazi zekhompuyutha; ukuphela okuhle nokunamandla
Uma sibheka ngaphakathi kwale Lumia 640 singathola ifayela le- I-Snapdragon 400 ene-7 GHz Cortex A1,2 quad-core CPU ne-Adreno 305 GPU. Kulokhu kufanele sengeze inkumbulo ye-1 GB RAM engaphezulu kokwanele ukusinikeza isipiliyoni esingaphezu kokuthakazelisa nesamukelekayo.
Ngemuva kokukhama le Lumia 640 ngendlela ecishe ibe nonya, iphendule ngendlela emangalisayo futhi ngaphezu kwehadiwe yayo, singasho ukuthi nayo inokuningi okuphathelene ukwenza kahle iWindows Phone 8.1 Update 2 ukuthi ifake ngaphakathi.
Okwezinsuku ezimbalwa, nakwamanye amazwe kuphela, okusha Windows 10 Iselula seyivele itholakalela le-terminal, okwamanje esingakwazanga ukuyivivinya, kepha esicabanga ukuthi izosebenza kahle nakule divayisi futhi inikeze kahle ukusebenza. Uma ungazi imininingwane eminingi ngalolu hlelo olusha lweMicrosoft, ungathola kabanzi kuWindows News, ibhulogi elithakazelisayo mayelana neWindows universe.
Izigubhu; iphuzu eliqinile lale Lumia 640
Esinye sezici esingamangazanga kakhulu ngale Lumia 640 ngokungangabazeki ibhethri laso futhi lelo nge-2.500 mAh yayo inikeza ukuzimela okumangazayo.
Angiyena umsebenzisi obonisana ne-terminal yakhe amahlandla ambalwa ngosuku, kepha ngiyisebenzisa ngokuqhubekayo ngazo zonke izinhlobo. Ngokusetshenziswa okungaphezu kokujula angigcinanga nje ngo- "kufika ngiphila" ekupheleni kosuku kepha ngikwazile ukufika ngendlela evulekile nge-25% yebhethri esele ezinsukwini eziningi.
Ukusebenza kabusha kwayo yonke i-hardware ne-software kudlala indima ebalulekile ukuze ukuzimela okunikezwayo kumangaze futhi kuthakazelise ngempela kunoma imuphi umsebenzisi othenga iLumia 640.
Le Lumia 640 isivele ithengiswe izinyanga ezimbalwa emazweni amaningi omhlaba, yize emasontweni edlule intengo yayo yehle kakhulu ngenxa yamahlebezi amaningi amemezela ukwethulwa nokwethulwa kwemakethe kweLumia 650, okuzongena esikhundleni sayo.
Njengamanje singakwazi thenga ku-Amazon, ngohlobo lwayo lwe-LTE ngama-euro ayi-158. Ngaphezu kwalokho, inguqulo ye-XL iyatholakala futhi esingayithola cishe ama-euro angama-200, noma ngabe uma sisesha kahle singayithola ngentengo ephansi.
Mhlawumbe uma ungafuni ukuthatha isinyathelo sokuthola le Lumia 640 manje, ungahlala ulinde izinsuku ezimbalwa ukubona ukuthi i-Lumia 650 isinikeza ini futhi siyithenge ngokusebenza nentengo bese unquma ngomfowethu omncane noma omdala.
Njengoba ngishilo ekuqaleni kwendatshana Le Lumia 640 ingishiyile ngaphandle kokungabaza ukunambitheka okuhle emlonyeni wami futhi isithandile ngokusebenziseka kwayo okulula kanye nezinsizakusinikeza ukuthi sisebenze ezihlobene namanye amadivayisi we-Microsoft noma okungenani ngohlelo olufanayo lokusebenza. Isibonelo, kuyasiza kakhulu ukusebenza ne-Microsoft Office noma i-Google Drayivu nokuhlanganiswa kwayo okuqondile ku-Windows Phone. Ngokufika kwe-WIndows 10 Mobile entsha, lokhu kuhlanganiswa kuzothuthuka kakhulu, ngemisebenzi emisha nezinketho zizovela endaweni yesehlakalo, ngakho-ke le Lumia 640 nayo yonke i-Lumia ingaziswa kakhulu.
Ukube bekufanele ngigqamise izici ezithile ezinhle, ngingahlala nokuzimela okusinikeza kona, ukusebenza kwayo kanye nentengo yayo. Ohlangothini olubi ngokungangabazeki kunamakhamera alo, ngaphambili nangasemuva, okungenzeka ukuthi bengilindele okuningi nokuklanywa kwawo, okuphindaphindayo futhi okukhathazayo, nalokho kwepulasitiki wami ompofu, ngombala ongakuvumeli ukuthi kungabonakali. azikho izimo. Vele, umbala mncane futhi ungawuthenga komunye umbala ongashayi kahle noma ubeke ikhava evumela ukuthi le Lumia ingabonakali ngokuphelele.
Uma, njengokuhlolwa, bangicela ukuthi ngiyinikeze inothi futhi ngicabangele amanye amatheminali walokho okubizwa ngokuthi yi-mid-range, ngingawabeka phakathi kuka-7,5 noma u-8, yize benenothi lokuthi babukeze ekhaya futhi lapho lalizobhekisa khona kumakhamera, lapho futhi ngangilindele okuthile okungaphezulu.
Ucabangani ngale Lumia 640?. Ungasinika umbono wakho noma usitshele bese usibuza ukuthi yini oyidingayo ngalesi siginali. Ukwenza lokhu ungasebenzisa isikhala esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ukwenza kanjalo ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu esikhona.
I-Microsoft Lumia 640
Ukubuyekezwa kwe: AmaVillamandos
Ikhamera yangaphambili nangemuva
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » IMicrosoft Lumia 640, ibanga eliphakathi nelithakazelisayo esivele linalo Windows 10 Iselula
Nginayo, futhi njengoba u-6 ekuseni ngiyisebenzisa kakhulu, kungu-10: 30 ebusuku futhi nginebhethri elingu-27%, ngaphandle kokungabaza kungenxa yokwenziwa ngcono kwe-android entula namuhla, ikhamera ihlolwe ngamatheminali afana i-lg g 3 ne-bq fhd 5 isivele iwine i-640 (ngaphambili icishe yahlukaniswa hehehe) iselula enhle maqondana nokwakheka kokubeka ikhava yize ngiyithanda, i-athikili enhle futhi ngenza okuningi ngamazwana avela ku-lumias nakwabanye (;
Ngivumelana nawe ngokuphelele kukho konke u-Edgar.
Ungafunda okuningi ngeLumias, Windows noma Windows 10 Iselula ku-windowsnews.com
Ukubingelela nokubonga ngemibono yakho!
IVicente FG kusho
Ngine-640 XL LTE Dual SIM ene-sim yami yangasese neyomsebenzi, ene-wifi ne-bluetooth futhi nebhethri lihlala usuku lonke. okwanele. Ezinsukwini ezingasebenzi, ibhethri lihlala izinsuku ezintathu kuya kwezine ngokusetshenziswa okulingene. Ngibuyekeze kabusha Windows 10 iselula ngohlelo lwangaphakathi futhi yakha iqembu eliphelele ne-PC yami neThebhulethi yami ene-Windows 10. Ngijabule kakhulu ngokusebenza kwayo futhi bengingeke ngiphinde ngihlanye ku-Android noma i-shit i-apula lifuna ukweba, iya ebhange !!!)
Phendula kuVicente FG
Ngivumelana ngokuphelele nawe Vicente FG, izigubhu ziyinjabulo yangempela.
umsebenzisi 640 kusho
Ayikho isevisi eSpain noma kuphi. Uzamile ukuthumela lesi siginali ukusilungisa uma kwenzeka kuba nesikrini esiphukile
Phendula kumsebenzisi 640
Angikaze ngiyizame, kepha lokhu kungenzeka nganoma yisiphi isiginali, ngokwesibonelo isiShayina.
Akuyona yonke into engaba yinhle 🙁
Uma unensizakalo yezobuchwepheshe eSpain, ngithumele iLumia 830 yami evela efektri inephutha futhi kwathatha isonto ukuyibuyisela isilungisiwe. Kufanele ungene ekhasini le-Microsoft, isigaba sokwesekwa kwezobuchwepheshe, ugcwalise imininingwane bese bakuthumela i-imeyili enalo lonke ulwazi nephepha ongalifaka kuphakheji othumela kuyo ifoni ukuze izokhululeka (Reverse ukuphathwa).
Uma benayo, ngisho ngoba ikhompyutha yami ishise ipulagi yokushaja yeselula futhi kuthathe isonto ukuyilungisa futhi yabekela eceleni icala lesipho (:
Lezi ngezinye zezindaba esingazibona kwi-Mobile World Congress
Lolu lonke ulwazi esilwaziyo nge-LG G5